တန်ဟတ် ဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရာထူးကို 100% စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ Sky Sports နဲ့ CBS သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြ - xyznews.co
တန်ဟတ် ဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရာထူးကို 100% စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ Sky Sports နဲ့ CBS သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြ
November 22, 2021 - by Editor
ဆိုးရှား ကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် ဟာ နည်းပြသစ် ရှာပုံတော် ဖွင့်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အလျှင်စလို ရှာဖွေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ အသင်းရဲ့ ပေါ်လစီတွေ ၊ သမိုင်းကြောင်းတွေ နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမယ့် နည်းပြမျိုး ကို စီစစ်လျှက် ရှိနေတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။
လက်ရှိ ယူနိုက်တက် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကစားသမား စာရင်းအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဘယ်လို နည်းပြမျိုးက မဆို ကိုင်တွယ်ချင်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒါတော့ သံသယ ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။
အသင်းရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကပဲ လက်ရှိ ကစားသမားစုဖွဲ့မှု နဲ့ ကိုက်ညီမှု အရှိဆုံး မန်နေဂျာမျိုးကို ဆွဲခန့်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန်ထိတော့ သတင်းတွေ က အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေဆဲပါ။ စပိန် လက်ရွေးစင် နည်းပြ လူးဝစ် အင်းနရစ် ၊ ပီအက်စ်ဂျီ နည်းပြ ပိုချက်တီနို ၊ အေဂျက် နည်းပြ အဲရစ် တန်ဟတ် ၊ လက်စတာ နည်းပြ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာ တို့က ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
လူးဝစ် အင်းနရစ် ကတော့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရာထူး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ငြင်းဆိုထားပြီး ၊ အင်္ဂလန် သတင်းတချို့မှာတော့ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြရာထူး ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မီဒီယာတွေ ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံခြင်း မရှိသေးသည့်တိုင်အောင် လက်စတာမှာ စွမ်းဆောင်ပြထားတဲ့ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ကစားသမား စာရင်းနဲ့ နှိုင်းစာရင် ရလာဒ်ပိုင်းက ကျော်လွန်နေသေးတယ်လို့ ယုံကြည်နေတာကြောင့် အဲဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမား စာရင်းမျိုး ကို ကိုင်တွယ်ချင်နေတယ် သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
Sky Sports သတင်းဌာန နဲ့ CBS သတင်း ဌာနကြီးတွေ ကတော့ အေဂျက် ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် တန်ဟတ် ဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြရာထူး ကို 100% စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ ဖော်ပြနေကြပါပြီ။
တန်ဟတ် ဟာ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် ကို တာဝန်ယူခဲ့စဉ် အချိန်က လူငယ် အသင်းမှာ နည်းပြလုပ်ရင်း ကတ်တလန်သားကြီး ရဲ့ အိုက်ဒီယာတွေ အပေါ် အရမ်းကို အားကျခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အေဂျက် ကို တည်ဆောက်ချိန်မှာတော့ ပက် ရဲ့ မူဟန်တွေ အပြည့်နဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်တွေ ပေါင်းစပ်ကာ ဥရောပ ရဲ့ စောင့်ကြည့်ချင်စရာ အကောင်းဆုံး အသင်းမျိုးဖြစ်အောင် ရပ်တည်ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
အေဂျက် အသင်းကို ကိုင်တွယ်တာ အခုမှ စုစုပေါင်း 185 ပွဲ ပဲ ရှိသေးသော်လဲ စုစုပေါင်း သွင်းဂိုး က 500 ပြည့်မြောက် ထားခဲ့ပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ဒီရာသီ ဟော်လန် အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲ နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ စုစုပေါင်း 56 ဂိုး သွင်းယူထားကာ4ဂိုးသာ ပြန်ပေးရသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကြောင့် ယူနိုက်တက် ပရိသတ်အများစု က သူ့ကို အိုထရက်ဖို့ဒ်မှာ မြင်တွေ့ခွင့် ရချင်နေကြပါတယ်။
မနေ့ညက ESPN နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ကို အခုလို တုန့်ပြန်သွားခဲ့ ပါတယ်။
“ ကျနော် က အေဂျက် ကစားသမားတွေ အားလုံးကို ကလပ်အတွက်ပဲ အာရုံစိုက်ထားတာမျိုး လိုချင်တာပါ။ ဆိုတော့ နည်းပြ တစ်ယောက် အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စံပြ ဖြစ်အောင် ကျနော်လဲ နေထိုင်ပြရမယ်လေ။
ကျနော်ဟာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပိုချက်တီနို တို့နဲ့ အတူ ပါဝင်နေတယ် ပဲ ထားပါတော့။ အေဂျက် အတွက်ပဲ အာရုံစိုက်ထားတာပါ။ ဒီကလပ် နဲ့ အတူ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရချင်ပါတယ်”
“ခင်ဗျားတို့ က ဒီအကြောင်းအရာပဲ လှည့်ပတ်မေးနေကြတယ် ၊ ကျနော် က အေဂျက် အတွက်ပဲ အာရုံစိုက်ထားတယ် ဆိုတာ ပြောပြီးပြီလေ။ ဒီလို မေးခွန်းက ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်က ဘာမှ မကြားသေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာတွေ ပြန်ပြောစေချင်တာလဲ။
ဒီလိုလေး ကြည့်အောင် ဖြေကြည့်မယ်ဗျာ……ယူနိုက်တက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှလဲ မသိဘူး ၊ ဘာမှလဲ ဆက်သွယ်လာတာမျိုး မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာမှ ခေါင်းထဲထည့်ပြီး တွေးနေစရာ မလိုဘူးလေ” လို့ တုန့်ပြန်သွားခဲ့ ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကတော့ တန်ဟတ် ကိုသာ လိုလိုချင်ချင် နဲ့ ချဉ်းကပ်မယ် ဆိုရင် ရာသီအကုန်မှာ အသင်းဆီ ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
မန်ယူနိုက်တက် ရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ ခေါ်ယူမှု ၊ နေမာကို ပယ်တော့မယ့် PSG ၊ ချဲလ်ဆီးရဲ့ တရစပ် စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ဒွန်နီ နဲ့ ဖရန်ကီ တို့ရဲ့ ကွင်းလယ် အတွဲ အပေါ် တန်ဟတ် ဘယ်လို မှတ်ချက်တွေ ပေးခဲ့ဖူးသလဲ ???
အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေ ကျယ်လောင်လာခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ အနာဂတ် ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ရွိုင်ကိန်
Previous Article ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေ အပေါ် ပေါက်ကွဲလိုက်တဲ့ ရွန်းနီ
Next Article အထုတ်ခံရတဲ့ ဆိုးလ်ရှား အတွက် ဆုတောင်းစကား ၊ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ မှတ်ချက်ပေးစကား ပြောရင်း အမှန်တရား တစ်ခုကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂွာဒီယိုလာ